အနောက်ဥရောပအားဖြင့်ရထားခုနှစ်တွင်များအတွက်သိကောင်းစရာများ2ရက်သတ္တပတ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အနောက်ဥရောပအားဖြင့်ရထားခုနှစ်တွင်များအတွက်သိကောင်းစရာများ2ရက်သတ္တပတ်
ဥရောပတစ်မြေပုံဖမ်းဆုပ်အဘယ်မှာသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အိပ်မက်ဆိုးနိုင်ပါတယ်! ဟုတ်ကဲ့, သငျသညျရရှိပါသည်အားလုံးရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲများမှာအထူးသဖြင့်လျှင်. ယဉ်ကျေးမှု၌ဒါကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောတစ်ဦးတိုက်ကြီးတွင်, နှစ်ပတ်အတွင်းဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်ပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်! ထိုကွောငျ့, ဒါကြောင့်ခရီးစဉ်နှုန်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများကိုဝေနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးင်. သငျသညျမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံလောက်အောင်အချိန်နှင့်အာကာသပေးခြင်းနေလမ်း တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံကကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအဘယ်အရာကိုအပြည့်အဝတန်ဖိုးထား. ရထားအနောက်ဥရောပစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာအရပ်, နှင့်ရထားထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်သို့သောလမ်းခရီးသွားလာ!
မှ Going အနောက်ဥရောပ ရထားလမ်းမှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုစိတ်ကူးဖြစ်သကဲ့သို့ရထားဟာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံ! ဒါကစျေးပေါနှင့်အဆင်ပြေရွေးချယ်မှုနှစ်ပတ်အတွင်း၏သက်တမ်းအတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မီးရထားအတှေ့အကွုံအားဖြင့်အနောက်ဥရောပအောင်နေသည်. နိုင်ငံပေါင်း၏ဤအုပ်စုသည်ကောင်းစွာသမိုင်း၌ဗတ္တိဇံကိုယင်း၏အမွေမှုအတွက်လူသိများသည်, အတတ်ပညာ, နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဗိသုကာ! သူတို့ရဲ့အစားအသောက်ဌန်သင်နီးပါးမဖြစ်နိုင်သင့်ရဲ့လမ်းလာအရာအားလုံးကိုအစာစားခြင်းခုခံတွန်းလှန်ရန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မတူကွဲပြားဖြစ်ပါသည်. အနောက်ပိုင်းဥရောပရဲ့ကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်မှုမှသည်ခေတ်သစ်အသက်တာသင်ချန်ထားမည် mesmerized အဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက် သဘာနှင့်ခေတ်ရေ.
ယင်း၏လူသိများ ဘီယာ, waffles, နဲ့ချောကလက်, ဘယ်လ်ဂျီယံရထားခရီးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနောက်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတောမသတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ယင်း၏သွက်အရက်ဆိုင်ကနေ, မရေမတွက်နိုင်သောပြတိုက်, အနုစိတ်ဗိသုကာဖို့ထူးခြားပြောင်မြောက်တူးမြောင်းခရီးစဉ်, ဒီတိုင်းပြည်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှဤမျှလောက်ရှိပါတယ်. သင်တို့ပတ်လည်သွား၏အစားပဲဘယ်လ်ဂျီယံသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, တိုင်းပြည်၏သွားရောက်လည်ပတ် ကမ်းခြေ – သူတို့အလွများမှာ!
အဘယ်မှာရှိတဦးတည်းပင်စတင်ထားဘူး? စပျစ်ရည်ကို, အဆိုပါအစားအစာသို့မဟုတ်အနုပညာ? အဆိုပါအမြဲပွတ်ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေ? ဒါမှမဟုတ် အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော ယောက်ျား? ကျော်နှင့်အတူ 30 သန်းနိုင်ငံခြားဧည့်သည်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, အလင်း၏စီးတီးကိုအခြားမတူဘဲခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်း. အဘယ်ကြောင့်မြောက်မြားစွာပြတိုက်ရှာဖွေစူးစမ်းအချိန်ကိုမဖြုန်း, စားသောက်ဆိုင်, နှင့် စျေးဆိုင်? ဒါမှမဟုတ်ကျေးလက်မှလွတ်မြောက်ရန်, အဆိုပါကျော်ကြားပြင်သစ်ကမ်းခြေကိုခံစား, နှင့်၎င်းတို့၏ပါတောင်ပေါ်သို့သွားရောက်မယ့်ခရီးစဉ်ကိုယူ? ဟုတ်ကဲ့! တစ်ဦးကဆုကြေးငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း? အဆိုပါရထားလမ်းဆက်သွယ်မှုအံ့သြနေကြသည်! ရထားအနောက်ဥရောပဘက်လျက်နှင့်သင်ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာဖွင့်အဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်!
Bordeaux ရထားမှ Lyon လေဆိပ်
ဆွစ်ဇာလန်မှခရီးသွားလာအမြဲကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်ပါသည်. ရထားဆွစ်ဇာလန်မှခရီးသွားလာတစ်ဦးပင်ပိုကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. မသာဖြစ်ကြ ဥရောပအကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်ဆွစ်ဇာလန်ရထား, ဒါကြောင့်လည်းတစ်ဦးရဲ့ ရထားသွားရောက်ကြည့်ရှုအားအလွန်သာယာလှပနိုင်ငံများ. ဆွစ်ဇာလန်ဥရောပရဲ့အများဆုံးအချို့မှနေရာဖြစ်သည် လှပသောရေကန်များ, အကျော်ကြားဆုံးတောင်ထိပ်, နှင့် ချောကလက်ရယူထားသော. ယင်း၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါသည်! ကျော်နှင့်အတူ 200 လူမျိုးပေါင်းစုံ, ဒီကျိန်းသေတိုင်းထောင့်အပေါ်သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံပူဇော်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
မီးရထားအတှေ့အကွုံအားဖြင့်အနောက်ဥရောပအတိတ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအနောက်ဥရောပအတွက်တိုးပေါ်ခဲ့. ကြောင်းဒေသကနေမှသာအနည်းငယ်နိုင်ငံများတွင်ပူဇော်ဖို့ရှိသည်အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်, ဒါဟာဘာကြောင့်စိတ်ကူးဖို့တကယ်ခက်ခဲမယ့်. အဆိုပါမကြာခဏနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာသွားလာစေ, အမှန်. ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာအခါသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ရုံသငျသညျအထိယခု.
အသုံး Save-A-ရထား သင့်ရဲ့စာအုပ်ဆိုင် စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နှုန်းထားများမှာမီးရထားလက်မှတ်. စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစိတ်သက်သာရာမဆိုလိုရာခရီးကိုသွားပါ! ရထားအနောက်ဥရောပ Exploring ပိုမိုလွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှ, ကျနော်တို့သူတို့အားနှစ်ပတ်အတွင်းအားဖြင့်ပျံသန်းပါလိမ့်မယ်အလောင်းအစား!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwestern-europe-train%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
europetravel ရထားခရီးသွား travelbelgium travelfrance travelswitzerland traveltips